Shiinaha LSCB-02 Salmon oo leh warshad buskudka loo yaqaan 'Catnip Biscuits' iyo soosaarayaasha | Doqon
LSCB-02 Salmon leh buskudka loo yaqaan 'Catnip Biscuits'
Dhammaan alaabtu waxay ka socdaan beertadeenna iyo baaritaanka Shiinaha iyo Karantiinka diiwaangashan. Qayb kasta oo ka mid ah maaddada ayaa la kormeeri doonaa ka dib markay yimaadaan warshadda. Si loo hubiyo in waxyaabaha aan isticmaalno ay yihiin 100% dabiici iyo caafimaad.
Xayawaanku wuxuu daaweeyaa soo saaraha ilaa 1998 iyadoo 250,000 sqm. Oo ka kooban 6 aqoon isweydaarsiyo wax soo saar heer sare ah. Waxaan leenahay 20 beero digaag, 10 beerood duck, 2 warshad gawraca digaaga, 3 warshad gawraca shimbiraha, 1500 tan maalintii. Waxaan leenahay waaxda R&D noo gaar ah, sanad walba waxaan kordhin doonaa maqaallo cusub. Tayada sare, qiimaha hooseeya, gaarsiinta degdega ah, sidoo kale habeyn doonta. Macna malaha waxa looga baahan yahay, dhamaanteen waan kula kulmi karnaa!
Maadaama aan nahay xirfadle bixiye cunno xayawaan ah, waxaan badanaa iibsanaa cuntada xayawaanka, cuntada fudud ee xayawaanka, daaweynta xayawaanka, cuntada eeyga, cunnada fudud ee eyga, daaweynta eyga, cunnada bisadaha, cunnada fudud ee bisadda, sida cunnooyinka dareeraha ah ee bisada, cunnooyinka eyga ilkaha, buskudka eyga, cuntada eyga qasacadaysan iyo cuntada bisadaha ku jirta.
Hore: LSCB-01 Buskud Digaag Digaag
Xiga: LSCJ-01 Digaag Digaag
LSCB-01 Buskud Digaag Digaag